၂၀၁၉ မှထွက်မယ့် 'Game of Thrones' Season 8 - MoviesFan
၂၀၁၉ မှထွက်မယ့် ‘Game of Thrones’ Season 8
Game of Thrones ပရိသတ်တွေကတော့ စောင့်ရလွန်းလို့ လည်ပင်းတွေရှည်ကုန်တော့မှာပါ။ အရင်က ကောလဟာလတွေထွက်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်း Game of Thrones ရဲ့ နောက်ဆုံး Season ဖြစ်တဲ့ Season 8 ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကျမှ ထုတ်လွှင့်ပြသမှာဖြစ်တယ်လို့ HBO ကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Game of Thrones ကို ဖန်တီးသူတွေဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ အအောင်မြင်ဆုံး TV Series တစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို တတ်နိင်သမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်စေလိုတာကြောင့် ပုံမှန်ထက်အချိန်ပိုယူရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။ အပိုင်း ၆ ပိုင်းသာပါဝင်မယ့် ဒီ season ကို အချိန်အဲဒီလောက်ယူမယ်ဆိုတော့ အရည်အသွေးကတော့ တော်တော်ကောင်းမယ်လို့ မျှော်လင့်လို့ရလောက်ပါတယ်။
ဒီ season ကို Game of Thrones ရဲ့ showrunner တွေဖြစ်တဲ့ David Benioff နဲ့ D.B. Weiss တို့အပါအဝင် အရင် season က ဒါရိုက်တာတွေဖြစ်တဲ့ David Nutter နဲ့ Miguel Sapochnik တို့က လက်တွဲဖန်တီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် David Benioff, D.B. Weiss, Bryan Cogman နဲ့ Dave Hill တို့က ဇာတ်ညွှန်းပိုင်းကိုတာဝန်ယူသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
Previous Post: Horror ကားချစ်သူတွေအတွက် ‘Blumhouse’s Truth or Dare’ Trailer
Next Post: Emilia Clarke နဲ့အတူ Game of Thrones ကြည့်ခွင့်ရဖို့အတွက် လေလံပွဲမှာကြိုးစားခဲ့တဲ့ Brad Pitt